मा परीक्षण जनवरी: अझै पनि एक हिट छ । -दोस्रो
परिवर्तन भएको छ
पछि हामी भनिन्छ, हामी तुरुन्तै याद लेआउट को कथा छ, सामान्य सेटअप संग दुई प्रत्येक अन्य शीर्ष मा सिर्जना सञ्झ्याल र एक विन्डो लागि च्याट मा सही विगत एक कुरा हो । आज, तपाईं देख्न हुनेछ मात्र — ठूलो, तथापि. पाठ बक्स छ: तपाईं त समझ संग मात्र वचन र छवि, म डराउछु. प्रयोग गर्न, तपाईं आवश्यक कुनै दर्ता छ । विपरीत मा यस्तै सेवाहरू, छैन पनि आफ्नो लिङ्ग वा एक निक नाम छ । तपाईं के गर्न सबै छ छ माथि देखाउन र मुस्कान । मात्र एक प्रतीकात्मक अर्थमा: पहिले तपाईं गर्न सक्छन् अपरिचित जडान, अनुहार पत्ता लगाउने — तर केवल एक पटक को शुरुवात मा, यो सत्र । हामी फेला कि यो रोक्छ सबै, जो सबै कडा प्रतिनिधित्व. मुस्कान बस शुरुवात छ, र त्यसपछि क्यामेरा मा प्रकट लैंगिक. भने पनि लोकप्रियता, यो रहेको प्रयोगकर्ता पूल नै छ: अझै छन् जो मान्छे को लागि को खोज मा नाङ्गो, मानिसहरू । देखि केही अस्पष्ट कारण, पाठ गरिएको छ मा च्याट र भेटी लागि एक च्यानल भन्दा कम प्रतियोगिहरु जस्तै फ्री छ । बिना कुराकानी गर्न संभावना को किबोर्ड प्रयोग, तपाईं गर्न बाध्य छौं कुराकानी — र, दुर्भाग्यवश, तपाईं देखाउन चाहन्छौं भन्दा अन्य प्रयोगकर्ता बस उनको लिंग पनि छ, जो मा सानो बाटो द्वारा अपरेटर. मात्र समीक्षा गरेर एक सजिलै अनुहार-जाँच गर्दैन र नाबालिगहरूको रोक्न प्रयोग गर्न संभावना. यसैबीच छन्, कम से कम एक»रिपोर्ट»बटन लागि अनुपयुक्त व्यवहार छ । के त्यो गरिरहेको छ । उहाँले समावेश स्थायी रूपमा प्रणाली देखि.
हामी भन्न सक्दैन दुर्भाग्यवश, किनभने त्यहाँ कुनै
नाङ्गो अनुहार खोजिरहेको र मूल्य मा विश्वसनीयता साथै सुरक्षा मा राखे, हामी गर्न सक्छन् तपाईं सिफारिस एकल बजारहरु मा भविष्य । छ को सबै प्रकारका वरिपरि मान्छे. यसैबीच, तथापि, अधिकांश पुरुष छन् ।, कुनै मोबाइल अनुप्रयोग छ. तपाईं उपयोग गर्न सक्छन् सीधा ब्राउजर मा आफ्नो स्मार्टफोन कल.
अक्सर, एक पनि देख्नुहुन्छ नोटर»च्याट»तर तिनीहरूले गलत हो.
यो मतलब छ कि आफ्नो च्याट साथी सधैं यो जडान
हुन कुनै पनि अन्य प्रयोगकर्ता जोडिएको हुनुपर्छ, पत्ता, एक व्यक्ति को अनुहार को पूर्ण उमेर । यो पूर्ण छ भने, तपाईं कवर गर्न सक्छन्, यो कुनै पनि समयमा क्यामेरा छ । हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भनेर अन्य प्रयोगकर्ता लामो रहन तपाईं संग छ । सामान्यतया जडान कारण समस्या संग समस्या आफ्नो इन्टरनेट जडान छ । यदि तपाईं समावेश यो, तपाईं पनि समर्थन मा इमेल गरेर समर्थन सम्पर्क । यस गर्न, तपाईं पर्छ बटनमा क्लिक संग भन्छन्,»पहुँच प्रदान गर्न र माइक्रो-फोन»(«पहुँच अधिकार क्यामेरा र माइक्रो फोन अनुदान»). यो नजोडिएको सकिँदैन, तर, कुराकानी साझेदार कुराकानी मुख्यतः अंग्रेजी मा तपाईं संग छ । दुर्भाग्यवश, बारेमा
एक केटी संग एक केटी - मानिस मर्छ विजेता पछि, अष्ट्रेलियन यात्रा मा एलेन →